Woza Umuntu U-Marcare I-Brevi Collegamenti - U-Azioni Semalt L'aggiornamento
Iwebhusayithi yezokuxhumana isixhumanisi sokuncishiswa akuyona into entsha emkhakheni wezokuxhumana. Kodwa-ke, bekungeze kube yilapho maduzane ukuthi ama-brand aqonde ngokugcwele isidingo sabantu abafinyeleleka ekuxhumaniseni isixhumanisi ekufuneni ukuchofoza okunye futhi nakanjani ukutshela indaba yabo.
Esikhundleni sokusebenzisa izixhumanisi ezimfushane ezijwayelekile ezifana nalezi ze-Google ne-Bitly ezinikeleyo, cabanga ngendlela ongenza ngayo ngokwezifiso eyakho ukwenza izixhumanisi ezimfushane ezibonisa umkhiqizo nobuntu bakho. Vele uvume, izixhumanisi ezimfushane ezihlinzekwa yi-Bitly azikho into enhle, akunjalo?
Njengoba sibona izinombolo ezikhuphukayo, kukhona okunye okuvelayo. Iningi lalezi zixhumanisi ezibekwe uphawu nezifiso zifaka isizinda sangaphambilini sezinga eliphezulu (izandiso ezifingqiwe njenge-TLD).
Kungani abantu beya kuma-TLD? Lezi zici, ezichazwe uMichael Brown, iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende Semalt , zingasiza ukuphendula lokho - best ssd vps.
Ngeke baxubeke kuwebhusayithi yakho
Uma usebenzisa esinye isizinda ukudala abancanyana besixhumanisi, ngeke sisetshenziswe nganoma iyiphi enye inhloso ngaphandle kwalokho. Uma uhlela ukusebenzisa i-URL eyinhloko njengesifinyezo sokuxhumanisa, wabe usumangele. Ngiyajabula manje uyazi.
Kunezinzuzo eziningi zokudala izizinda eziyingqayizivele ikakhulukazi kumanethiwekhi omphakathi wezokuxhumana. Isibonelo, kusiza ithuluzi lakho lokuhlaziya ukulandelela uhlobo lomgwaqo olwenziwa ngumsebenzi wezokuxhumana wezenhlalo nokuchofoza. Ngaphezu kwalokhu, ingabe ungacabanga ngendlela engcono yokunikeza inethiwekhi yakho yomphakathi njengobuntu bakhe obuhlukile, kunjalo?
Zifanele kokuqukethwe kwakho
Izixhumanisi ezenziwe ngokwezifiso zingenye yezinzuzo eziningi zokusebenzisa izandiso zesizinda esisha. Yiqiniso, ungagxila ekudaleni kwakho ngakwesokunxele kwendiza uma udala i-TLD eyifa noma ngabe ivinjelwe ngokwezinga elithile. Uma uyisitolo semidiya ke ukukhuliswa kwe-.NEWS kuzoba okuyingqayizivele. Abadwebi bezithombe bangabheka..Isandiso se-PHOTO nokunye. Manje susa ubuhlakani bakho bese uthola into epholile.
Amagama amakhulu ezimboni ezinkulu asevele esebenzisa le mboni. Izixhumanisi ezigqamile zandisa ukuqwashisa ngomkhiqizo nokwakha ukwethenjwa okuholela ekuzibandakeni okungcono nokukala kokuchofoza. Isibonelo esiphelele kungaba Seattle News esisebenzisa st.NEWS. Okufanayo kusebenza ku-StubHub (stub.live) no-Chic-fil-A (i-chicfila.social). Uma okuthiwa izibhamu ezinkulu zikhona, kungani ushiywe ngemuva?
Izixhumanisi ezimfushane ezifakiwe zivame ukwakha ukwethenjwa
Cabanga ngalesi simo, umsebenzisi uqhuma waba yisixhumanisi esifushane nomkhiqizo wakho we-TV noma i-brand.VidiO link, bacabangani? Ngitshele ukuthi ngeke yini bathembele kulokho okufanele nikwenze. Amaklayenti azokubuka ngokukhanya okusha - ngokusobala uzoba yinqubo ku-niche yakho. Othile owaziyo abakwenzayo. Izibalo aziqambi amanga - i-CTR ye-Bitly yayingu-34% ngaphezu kwezixhumanisi ezijwayelekile. I-ReBrandly yaziqhenya ngezinga lama-CTR angu-30%.
1. Hlola izizinda zakho. Thola ukuthi yini ongayisebenzisa kakhulu.
2. Thola ukuthi iwebhusayithi iyancipha kanjani. Kungaba yi-Bitly noma i-ReBrandly noma yimuphi umsebenzi.
3. Uma isizinda sihlanganisiwe ngokugcwele, kuhle ukuhamba.